Muraayadaha hal, laba, saddex waji leh waa calaamado muraayadaha maskaxda, maskaxda iyo maskaxda; globe globe, muraayadda ruuxiga ah.
Muraayadda ruuxiga ahi waa dunida abuurista. Dunida maskaxeed, adduunyadu waxay ka yimaadaan abuurista; Dunida maskaxeed waxay iftiimisaa muuqaallada soo jeedinta iyo isdhexgalka laftiisa; Dunida muuqaalku waa muuqaalka ka soo horjeeda.
Waqti kasta oo aan muraayad eegno waxaan aragnaa wax la yaab leh, oo cajiib ah oo aan qarsan. Qarsoodigu been kuma eka sawirka iyo muuqaalkiisa oo keliya, laakiin muraayadda lafteeda, waxa ay ka tarjumeyso, ujeeddada ay u adeegto, iyo waxa ay matalayso.
Waa maxay waxa aan ugu yeerno milicsi, ma hoosay baa? maya? laakiin xitaa haddii ay tahay hadh, waa maxay hadh? Ujeeddada degdegga ah ee muraayadda loo adeegto iyo wixii loogu adeegsado badankood waa qaabaynta labiskeenna iyo inaan aragno sida aan dadka kale ugu aragno. Muraayaddu waa astaamaha khayaaliga, kuwa aan dhabta ahayn sida lagu kala soocay midka dhabta ah. Muraayadaha ayaa ah astaamaha jismiga, astral, maskaxda, iyo adduunyada ruuxiga ah.
Sida waxyaabo badan oo lagama maarmaanka u ah ilbaxnimada, waxaan u aqbalnaa muraayadaha inay yihiin waxyaabo fudud oo waxtar leh waxaanna u aragnaa inay yihiin gogosha caadiga ah. Waxyaabaha muraayadaha ah waligood waxay qaddarin sare u hayeen odayaashii hore waxaana loo arkaa inay yihiin sixir, mucjiso iyo xurmo. Qarnigii saddex iyo tobnaad kahor farshaxanka soo-saarkii muraayadaha lama yaqaan Yurub, qarniyaalna qarsoodiga wax soo saarka waxaa ilaalin jiray masiibada haysata. Naxaas, qalin iyo bir ayaa markii ugu horaysay loo isticmaali jiray muraayadaha iyadoo la keenay boolis sare. Markii dambe waxaa la ogaaday in galaasku u adeegi doono isla ujeeddadii markii ay taageerayeen amalgams-ka biraha sida tin, lead, zinc iyo silver. Muraayadaha ugu horreeyay ee laga soo saaray Yurub waxay ahaayeen kuwo yar yar oo qaali ah, kan ugu weynna wuxuu ahaa laba iyo toban inji dhexroor. Muraayadaha maanta waa qaali waana lagu sameeyaa cabir kasta oo la doonayo.
Muraayaddu waa muuqaalka jirka oo ka yimid, dhinaca, gudaha, ama dhex mara, kaas oo iftiinka iyo qaababka iftiinka loo arki karo.
Muraayaddu waa tan ka tarjumaysa. Wax kasta oo ka tarjumaya waxaa si sax ah loogu yeeri karaa muraayad. Muraayada ugufiican ayaa ah tan sifiican u tarjumeysa. Waxay nuuraysaa ama dib u soo celineysaa nal, ama waxyaabo iftiinka ku jira ayaa ka tarjumaya. Muraayad muraayad ayaa rogmaysa, leexisa, ama tuuraya, milicsiga sawirka ama iftiinka kaas oo lagu tuuro iyada oo loo eegayo booska ama xagasha ay ku dhegantahay sawirka ama iftiinka.
Muraayad, in kasta oo ay hal shay tahay, waxay ka kooban tahay dhowr qaybood ama walxo ka kooban, dhammaantoodna waa lagama maarmaan in la sameeyo muraayadda. Qeybaha muhiimka u ah muraayadda waa muraayadda iyo birta ama amalgam ee biraha.
Markuu galaasku leeyahay asal go'an oo ku habboon, waa muraayad. Waa muraayad diyaar u ah inay ka tarjunto Laakiin muraayadda ma ka turjumeyso walxaha gudcurka. Iftiimintu waxay lagama maarmaan u tahay muraayadda inay wax ka tarjunto.
Waxaa jira muraayado aan fiicnayn oo aan dhammaystirnayn. Si uu u noqdo muraayad kaamil ah, muraayaddu waa inay noqotaa mid aan cillad lahayn, oo hufan, oo labada doogba waa inay ahaadaan xitaa kuwo dhumucdiisu dhan tahay Walxaha amalgam waa inay ahaadaan isku midab iyo tayo oo ay ku wada jiiftaan hal cufan oo isku xidhan kaasoo si isdaba joog ah oo aan galabsan u ah galaaska. Xalka ama walxaha hagaajiya asalka quraaradda waa inay noqdaan midab la'aan. Markaa markaa nalku waa inuu ahaado mid muuqda oo hagaagsan. Markay dhamaan shuruudahaasi jiraan waxaan haysannaa muraayad qumman.
Ujeedada muraayadda ayaa ah in wax laga tarjumayo sida ay run ahaantii tahay. Muraayad aan dhammaystirnayn ayaa weyneeya, yaraata, ka leexiya, wixii ay ka tarjumeyso. Muraayad qumman ayaa ka turjumaysa shay sida ay tahay.
In kasta oo ay umuuqato in ay sahlan tahay lafteeda, muraayaddu waa shay dahsoon oo sixir ah waxayna fulisaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan uguna muhiimsan adduunkan jireed ama mid ka mid ah afarta adduun ee la muujiyey. Muraayadaha la'aan maahan suurtagal in Egogu ka feejignaado mid kasta oo ka mid ah dunnida la muujiyey, ama dunidoo loo muujiyo. Waa abuurista, xojinta, milicsiga iyo milicsiga in muujinta lama-soocaanka ah la muujiyo. Muraayadaha ma xaddidan tahay in loo isticmaalo adduunka jir ahaaneed. Muraayadaha waxaa loo adeegsaday adduunka oo dhan. Muraayadaha waxaa laga dhisay walxaha adduunka ee loo adeegsado. Waxyaabaha iyo mabda'a ay ku shaqeynayaan waa inay ku kaladuwan yihiin dunid kasta.
Waxaa jira afar nooc oo muraayadaha ah: muraayadaha jirka, muraayadaha maskaxda, muraayadaha maskaxda iyo muraayadaha ruuxa. Waxa jira noocyo badan oo nooc kasta oo ka mid ah afarta nooc ee muraayadaha ah. Nooc kasta oo muraayad ah waxay leeyihiin adduun gaar ah oo leh noocyadeeda kala duwan, iyo afarta nooc ee muraayadaha oo dhan waxay leeyihiin wakiilo jireed oo dunida muuqaal ah oo ay ku mataanaysan yihiin.
Dunida jidheed waxaa lagu muujiyey muraayad hal dusha sare ah; dunida astral by muraayad leh laba sagxadood; Maskaxda oo leh saddex sagxadood, halka adduunyada ruuxiga ahna lagu muujiyey muraayad dhan walba ah. Muraayada hal-dusha ka muuqataa waxay u egtahay adduunka jir ahaaneed, oo laga arki karo dhinac keliya - hadda, dhinaca jireed. Muraayadda laba-dusha sare leh waxay soo jeedinaysaa adduunka astral, oo laga arki karo laba dhinac oo keliya: wixii hore iyo kan jiraba. Muraayada saddax geesood leh waxay matalaysaa adduunka maskaxda oo laga yaabo inuu ka muuqdo oo laga fahmo saddex dhinac: hore, hadda iyo mustaqbal. Muraayada oogada oo idil waxay u taagan tahay adduunyada ruuxiga ah ee loo soo dhawaaday lagana yaqaan dhinac kasta iyo wixii hadda ka dambeeya, kan hadda jira iyo kan mustaqbalkaba ku dari doona ahaanshaha weligiis.
Hal dusha sare waa diyaarad; laba sagxad waa xagal; saddex sagxadood ayaa samaysmaya jid; dusha sare oo dhan, Kuwani waa calaamadaha muuqaalka muuqaalka muraayadaha jirka, maskaxda ama astral, adduunyada iyo ruuxiga.
Jidhku waa dunida ka-fiirsashada fikradaha; astral, dunida milicsiga; maskaxda, dunida fidinta, gudbinta, milicsiga; ruuxiga ah, dunida fikradaha, ahaanshaha, bilowga, abuurista.
Dunida jidheed waa muraayadda adduunka kale oo dhan. Adduunyada oo dhan waxaa ka turjumaya dunida jir ahaaneed. Sida ay u kala horeeyaan, muuqaalka dunida ayaa ah halka ugu hooseysa ee lagu gaarey geedi socodka qasabka ah iyo bilowga howsha koritaanka. Muuqaalka iftiinka, markii iftiinka uu gaaro hoose ilaa halka ugu hooseysa, dib ayuu u laabanayaa oo wuxuu ku laabanayaa meeshii sare ee ka soo dhacday. Sharcigaani waa muhiim. Waxay matalaysaa fikradda ikhtiyaariga ah iyo isbeddelka. Waxna lama beddeli karo oo aan ku lug lahayn. Nal aan laga arki karin muraayad aan lagu soo tuurin muraayadda. Xariiqda iftiinka markay ku dhufanayso muraayad ayaa laga muujin doonaa isla xagal ama qalooca uu ku garaacayo muraayadda. Haddii xariiq iftiin ah lagu tuuro muraayadda xagal 45 darajo waxaa laga dheehan doonaa xagashaas oo waa inaan ogaano xagal kasta oo iftiinka lagu ridayo dusha muraayadda si loo awoodo inuu u sheego xagasha. taas oo ay ka turjumayso. Sida ku xusan xariijinta muujinta ee ruuxa ku lug leh shey, arrinta waxay ku dhici doontaa ruux.
Dunida jidheed waxay joojisaa geedi socodka ka-gogol-xaarka oo u rogaa wixii ku lug leh dib-u-socodka korniinka, si la mid ah oo muraayaddu dib ugu laabato iyadoo la adeegsanaayo iftiinka lagu shubay. Qaar ka mid ah muraayadaha jirka waxay muujinayaan walxaha jirka kaliya, sida shayada lagu arko muraayada indhaha lagu arko. Muraayadaha kale ee jirka waxay ka tarjumayaan iftiinka rabitaanka, adduunyada maskaxeed ama adduunyeed.
Muraayadaha jirka waxaa lagu xusi karaa dhagxaan, sida onyx, dheeman iyo krist; biraha, sida bir, daangada, lacagta, meerkuriga, dahabka iyo amalgams; kaynta, sida geedka oak, mahogany iyo ebony. Meydadka xoolaha ama xubnaha jirka dhexdooda isha ayaa si gaar ah uga tarjumeysa iftiinka dushiisa lagu tuuray. Kadibna waxaa jira biyo, hawo, iyo cir, oo dhammaantood iftiimiya iftiinka, iyo walxaha iftiinka u muuqda.
Muraayadaha jireed waxay leeyihiin qaabab kala duwan. Waxa jira muraayado dhinacyo badan leh oo giijisan. Waxaa jira concave and convex, dheer, muraayad ballaadhan oo ciriiri ah. Waxaa jira muraayado soo saara saameyno culus, kuna weecinaya astaamaha qofka wajigiisa. Noocyada muraayadaha noocan ah waxay matalaan dhinacyada nolosha jirka oo muraayad u ah adduunka kale.
Waxa qofku ku arko dunida waa muujinta waxa uu ku sameeyo dunida. Adduunku wuxuu ka tarjumayaa wuxuu u maleeyo iyo wuxuu sameeyo. Haddii uu dhoola cadeeyo oo gacantiisa ruxdo, isla isaga ayaa isaga isla isaga ku samayn doonta. Haddii uu qoslo, milicsiga ayaa sidoo kale qoslaya. Hadduu ka yaaban yahay, wuxuu arki doonaa wax la yaab leh oo lagu muujiyey xariiq kasta. Hadduu dareemo murugo, xanaaq, hunguri, farshaxannimo, dambi lahayn, cunsurinimo, islaannimo, khiyaano, kalitalisnimo, deeqsinimo, jacayl, wuxuu arki doonaa kuwaan oo la dhaqangaliyay, oo dib loogu soo celiyay adduunyada. Isbeddel kasta oo shucuureed, naxdin leh, farxad, cabsi, farxad, naxariis, xaasidnimo, beenta, waa la muujiyaa.
Waxa kaliya ee adduunka nooga yimaadda waa ka fikiridda wixii aannu ku samaynay ama dunida oo dhan. Tani waxay umuuqataa inay tahay wax la yaab leh oo aan run ahayn marka loo eego dhacdooyinka iyo dhacdooyinka badan ee ku dhaca shaqsiga inta lagu gudajiro cimrigiisa oo aan u muuqan inay ku biiraan ama ku xiriiraan wax fikradiisa iyo ficilkiisa. Sida fikradaha qaarkood oo cusub, waa wax la yaab leh, laakiin aan run ahayn. Muraayad ayaa muujin doonta sida ay run u ahaan karto; mid waa in uu sharciga barto ka hor inta ay xumaantu dhicin.
Adoo tijaabinaya muraayadaha, qofku wuxuu baran karaa ifafaale la yaab leh. U daa laba muraayadood oo waaweyn in ay midba midka kale midka kale u eego mid ka mid ah muraayadaha. Wuxuu arki doonaa milicsiga nafsadiisa midka uu wajahayo. Bal ha fiirfiiriyo milicsiga milicsiga uu ka dhex arki doono muraayadda gadaashiisa. Ha u eego mar kale muraayadda hortiisa hortiis oo wuxuu isu arki doonaa naftiisa oo ah mid ka tarjumaya milicsiga ugu horreeya ee laftiisa. Tani waxay u muujin doontaa isaga laba fikradood oo aragtida hore ah iyo laba ka mid ah aragtida dambe ee laftiisa. Isagu yuusan ku qancin tan, laakiin weli sii fogaan, wuuna arki doonaa aragti kale iyo mid kale iyo mid kale. Markasta oo uu raadinayo dadka kale wuu arki doonaa, haddii cabirka muraayadaha uu oggol yahay, ilaa uu arki doono isbadallo isaga laftiisa ku fidsan masaafada illaa isha ay gaari karto, iyo fekeradihiisu waxay u ekaan doonaan sida xariiqda ragga. adoo fidinaya wado dheer ilaa ay ka muuqan doonaan lama oga sababta oo ah indhuhu ma awoodaan inay sii fogaan karaan. Waxaan u qaadan karnaa sawirka jir ahaan annagoo kordhinayna tirada muraayadaha si ay u ahaato afar, sideed, lix iyo toban, soddon iyo laba, labo labo iyo iska soo horjeed. Kadib tirada tibaaxaha waa la kordhin doonaa tijaabiyahana kaliya ma laha muuqaal hore iyo gadaal, laakiin wuxuu ka arki doonaa jaantuskiisa dhinaca midig iyo bidix iyo xagallada dhexe ee kala duwan. Sawirka waxaa laga yaabaa in lagu sii wado iyadoo la sii haysto qol dhan oo ka kooban muraayadaha, sagxadda, saqafka iyo afar darbi oo ay muraayad ku jiraan oo geesaha ay ka kooban yihiin muraayadaha. Tan waxaa loo sii wadi karaa si aan xad lahayn. Ka dib tijaabiyuhu wuxuu noqon doonaa mid qoob-ka-ciyaaraya, isku arki doona isaga oo ka soo kor iyo hoos kana eegaya xagga hore iyo xagga dambe, midig iyo bidix; dhammaan xaglaha iyo isugeynta isugeynta.
Wax kasta oo ku dhaca ama nooga muuqda ficil qof kale, ayaa u ekaan kara inuu yahay beddelkii aan maanta ka turjumeyno ama ka sameyneyno adduunka, iyo, in kasta oo aan ka fikirno aragtida hadda jirta, ma arki doonno isku xirka. Si aan u aragno isku xirnaanta waxaan u baahanahay muraayad kale, mid ka tarjumaya wixii hore. Then we Dhacdooyinka aan lagu salayn karin sababahooda ama ilaha ay ka soo jeedaan, waa dib-u-dhigiddii lagu tuuray xilligan, ficillada tan iyo waagii hore, ficillada uu sameeyay jilaa, maanka, haddii uusan ku jirin jirkan nolosha, ka dib jir kale nolol hore.
Si loo arko milicsiga milicsiga, waa qofka caadiga ah ee daruuri u ah inuu haysto wax ka badan hal muraayad. Muuqaalka daruuriga ah ee tijaabadu waa inay lahaato nal u oggolaan doona qaabkiisa iyo ficilkiisa inay muujiyaan. Sidoo kale waa lagama maarmaan qofka arki kara xiriirka ka dhexeeya qaabkiisa xaadirka ah iyo ficilkiisa qaabab kale iyo ficilladoodii hore, iyo sidoo kale qaabab kale oo maanta dunida jooga, inay lahaadaan qaab-ahaan maalin oo ku hay nuurka maskaxda. Sida ugu dhakhsaha badan foomka loo arko ka tarjumaya iftiinka maskaxda, aragtidan ku jirta iftiinka maskaxda, marka nalkan la shido, ayaa dib u milicsanaya mar labaad iyo mar kale. Muuqaal kastaa waa sii wadida muuqaalkii hore, mid walbana qaab noocii hore ah. Markaa dhammaan foomamka iyo dib-u-eegis kasta oo ku yimaadda iftiinka maanka shaqsiga, iyada oo loo marayo taxane ahaantiisa, ayaa loo arki doonaa si cad oo leh awood iyo isfaham ku saleysan xoogga maskaxda si loo arko, loo kala sooco, loona takooro inta xilligan jirta, ee la soo dhaafay iyo xiriirkooda.
Khasab maahan inuu qofku yeesho muraayadaha si uu u arko fikradiisa haddii uu tijaabin karo isagoo maskaxda ku iftiiminaya iftiinkiisa. Inta muraayadaha badan ee laga yaabo inuu dhisi karo oo uu arki lahaa aragtidiisa ka tarjumaysa, labanlaab iyo sii kordheysa aan xadidneyn tirada, aad u badan wuxuu arki karaa muraayadaha la'aan, haddii uu awood u leeyahay inuu ka fikiro iyaga maskaxdiisa. Kaliya ma awoodi doono inuu arko milicsiga jirkiisa maankiisa, laakiin wuxuu awoodi karaa inuu ku xirnaado oo uu arko xiriirka ka dhexeeya waxkasta oo ku dhacay isaga, noloshiisa hada, wuuna ogaan doonaa markaa inaysan waxba dhicin waxay dhacdaa laakiin taas oo si uun ula xidhiidhay noloshiisa haatan jirta, iyada oo ka tarjumaysa waxqabadka noloshii hore, ama kuwii maalmahan kale ee noloshan.
Waxkasta oo dunida ka jira, ha ku noolaadee ama ha ahaadeene waxa loo yaqaan, laakiin waa muujinta ama milicsiga milicsiga ninku dhinacyadiisa kala duwan. Dhagaxyada, dhulka, kalluunka, shimbiraha, iyo xayawaanka noocyadooda kala duwan iyo qaababkooduba waa muuqaalka iyo milicsiga qaababka jir ahaaneed ee fikradaha iyo rabitaanka dadka. Bini aadamka kale, dhamaan noocyadooda kaladuwan iyo astaamaha ay ku kala duwan yihiin iyo kala duwanaanshaha shakhsiyadeed ee lama tirin karo iyo isu ekaanshahoodu, waa fikradaha aad u badan ee dhinacyada kale ee ninka. Hadalkani wuxuu u muuqan karaa mid aan run ahayn qofkii dhaca oo arko xiriirka ka dhexeeya naftiisa iyo waxyaabaha kale iyo waxyaalaha. Waxaa la dhihi karaa muraayad ayaa bixinaysa fikradaha oo keliya, kuwaas oo ka tarjumaya aaladaha aan ka muuqaneynin, iyo, in walxuhu ay ka duwan yihiin aragtidooda, iyo in adduunka walxaha ku jira naftooda ay yihiin abuuritaan madax-bannaan. In walxaha adduunka ay leeyihiin cabbirro, oo la yiraahdo dherer, ballaadh iyo dhumuc, halka walxaha lagu arko muraayadaha ay yihiin milicsiga dusha sare, oo leh dherer iyo ballaadh, laakiin aan dhumuc weynayn. Intaa waxaa sii dheer, in muraayadda muraayadda ay ka baaba'do isla marka shayga inta aan la saarin ka dib, halka noolaha nooli uu weli ku sii socdo sidii ay u kala aragti duwan yihiin adduunka. Kuwa diiddan waxaa laga jawaabi karaa in masawir shay uusan aheyn waxa uu muujinayo, in kasta oo uu u eg yahay.
Ku eeg muraayad indhaha ka eegaysa. Muraayada ma la arkaa? ama asalka? mise wixii asalka iyo galaaska isku haya? Hadday sidaas tahay markaa milicsiga si muuqata looma arko, laakiin waa mid si cad u qeexan oo keliya. Dhanka kale, wajiga iyo muuqaalka jaantusku si muuqata ma loo arkaa? Hadday sidaas tahay markaa muraayadda, asalkiisii, ama wixii labadan wada haysta lama arko. Milicsi ayaa la arkay. Sidee milicsigu ugu xidhan yahay waxa ka tarjumaya? Wax xiriir ah lama arki karo inta udhaxeysa milicsiga iyo shayga. Waxay u egtahay, sidii mid ka tarjumaysa, inay u egtahay lafteeda sidii shayga ay muujineyso.
Mar labaad, muraayadda eegaysa waxay muujineysaa tirada dhinac ee shay ay u muuqanayso. Waxa kaliya ee lagu arki karo shaxdan dadka kale waxaa lagu arki karaa iyadoo laga milicsanayo muraayadda indhaha. Waxaan ku aragnaa dusha sare kaliya shay eeg; laakiin mar dambe lama arkin qof dunida jooga. Kaliya waxa ka muuqda dusha sare ayaa la arkaa, oo keliya markii gudaha gudaha dusha laga arko, ka dibna dunida ayaa lagu arkaa. Ka dib waxaa sidoo kale lagu arki doonaa muraayadda eegaysa. Fikradda qoto dheer ama dhumucdu waa sida ugu macquulsan oo si muuqata loogu arki karo muraayadda indhaha sida shay kasta oo aan ka ahayn. Fogaanta waxaa lagu arkaa muraayadda eegaysa sidoo kale waa la arki karaa iyada la'aanteed. Hadana muraayadda eegaysa waa dusha oo keliya. Adduunku waa sidaas. Waxaan ku nool nahay kuna dhex soconaa dhulka dushiisa sida waxyaabaha walxaha muraayadda u eeg.
Tirooyinka iyo foomamka ku wareegaya adduunka, ayaa la sheegay inay ku jiraan naftooda isla markaana ay kaga duwanaan karaan muraayad-muraayad. Laakiin tani waa sidaas oo keliya in waqti dheer oo aan dhab ah. Foomamka ku dul wareegaya dusha sare ee dhulka waa aragti-bixinno keliya, sida muraayad muuqata. Sawirka ay ka tarjumayaan waa jirka astral. Taasi lama arkin; kaliya milicsiga ayaa la arkaa. Noocyadan qaabkan ah ee adduunka ka socda ayaa sii wadaya illaa iyo inta muuqaalka ay ka tarjumayaan uu la jiro. Markii muuqaalku baxo, foomku, sidoo kale, wuu baaba'aa, sida muraayadda eegaysa. Farqiga ayaa ku jira waqti kaliya, laakiin mabda 'ahaan.
Qof kastaa wuu kaga duwan yahay dadka kale qaab ahaan, muuqaal ahaan iyo astaamo ahaan, laakiin heer ahaan kaliya. Muuqda aadanaha ayaa ka muuqata dhammaan. Sanka sanka ayaa sanka ka ah haddii uu furan yahay ama fiiqan yahay, fidsan yahay ama wareegsan yahay, bararsan yahay ama dhuuban yahay, dheer yahay ama gaaban yahay, mid furan ama midab leh, midab leh ama midab leh; ishu waa isha midabkeedu yahay bunni, buluug ama madow, yicib ama qaab kubadeed. Waxay noqon kartaa caajis, dareere, olol, biyo-dhalaal ah, wali waa il. Dhegtu waxay noqon kartaa maroodiyaal ama wax u dhinma saamigeeda, oo raadad iyo midabbo kaladuwan ay u jilicsan yihiin sidii qolofka badda ama culus oo culus oo u eg gabal yar oo cirro leh, haddana waa dheg. Dibnaha waxaa laga yaabaa in lagu muujiyo xoog, jilicsan ama curyaan fiiqan iyo xariiqyo; afku wuxuu u muuqan karaa sidii wejiga oo kale oo engegsan ama qalafsanaan; waa afka si kastaba ha noqotee, oo wuxuu soo saari karaa dhawaaqyo si uu ugu farxiyo ilaahyadan curyaanka ah ama xitaa u cabsi geliyo walaalahooda, jinniyada. Astaamaha waa bini aadam waxayna muujinayaan kala duwanaansho aad u tiro badan iyo milicsiga dabeecadda bini-aadamka ee aadanaha.
Bini’aadamka waa noocyo badan ama wejiyada dabeecadda aadanaha taas oo lagu muujiyey muuqaallo badan oo ka turjumaya dhinacyada ama dhinacyada kala duwan ee aadanaha. Banii-adamnimadu waa nin, lab iyo dhadig, oo aan la arkin, oo iskiis isu arka marka laga reebo muuqaalkiisa laba-geesoodka ah, ee loo yaqaan nin iyo naag.
Waxaan eegnay muraayadaha jirka waxaanan aragnay qaar ka mid ah walxaha ay muujinayaan. Bal aan hadda tixgelinno muraayadaha maskaxda.